Muxuu Tababaraha PSG Ee Unai Emery Ka Yidhi In Neymar Jr Uu Booqasho Ku Tagay Kooxdiisii Hore Ee Barcelona Iyo In Uu Casharadiisa Dhibsaday? – WWW.Gool24.net
Muxuu Tababaraha PSG Ee Unai Emery Ka Yidhi In Neymar Jr Uu Booqasho Ku Tagay Kooxdiisii Hore Ee Barcelona Iyo In Uu Casharadiisa Dhibsaday?
31/10/2017 Abdulkadir Dajiye
Tababaraha ree Spain iyo kooxda Faransiiska ah ee Paris Saint-Germain ee Unai Emery ayaa beeniyay warar sheegayay in ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar Jr uu haatan dareemayo cadho xoogan islamarkaana uusan ku faraxsaneyn nolosha uu kaga sugan yahay kooxda PSG. Warbaahinta Spain ayaa qortay in haddaba uu Neymar ka qoomamoonayo go’aankii uu Barcelona uga baxay.
Paris Saint-Germain ayaa caawa martigelinsyds dhigeeda Anderlecht ee ka dhisan dalka Belgium kulankoodii afaraad ee Group B ee tartanka Champions League-ga iyada oo Neymar Jr uu diyaar u yahay inuu ka soo laabto ganaaxii uu kaga maqnaa kooxdiisa PSG.
Unai Emery ayaa kor kulanka Champions League-ga ee Anderlecht wuxuu ka hadlay xaalada Neymar Jr ee kooxdiisa isaga oo sheegay in xidiga ree Brazil uu la guulaysan doono wuxuuna yidhi: “Neymar wuu ku guuleysan doonaa halkan”.
Paris Saint-Germain ayaa ka dhigtay xidiga ree Brzil ee Neymar Jr ciyaartoyga ugu qaalisan taariikhda kubada cagta, kadib markii ay Barcelona kaga soo saxiixdeen aduun dhan 222 million euro. Neymar Jr ayaa tan iyo markii uu Paris soo gaadhay waxaa hadba la soo darsayay dhacdooyin ay ugu waynayd khilaafkii uu la galay Cavani.
Emery oo Neymar oo ka jawaabaya wararkii sheegayay in Neymar uu dhibsaday casharadiisa ayaa yidhi: “Neymar wuxuu kasoo qeyb galay dhammaan casharada ficilka ah ee kooxda, wuxuu fadhiyaa safka hore maxaa yeelay wuxuu fahamsan yahay sida ciyaartoyda oo dhan muhiimad ay ugu leedahay casharada la bixinayo, taasoo in badan ka caawineysa guulaha ay gaadhayaan”.
Intaa kadib Unai Emery ayaa ka hadlay in Neymar uu dib ugu laabtay kooxdiisii hore ee Barcelona oo uu dhawaan xarunta tababarkeeda ku booqday wuxuuna yidhi: “Neymar wuxuu heshiis la galay PSG maadaama uu xiiseenayay inuu la shaqeeyo mana jiraan wax kale, xaaladaha kale oo idil waa kuwa ku saleysan kubada cagta isla markaana caadi iska ah, Neymar wuxuu ku raaxaysanayaa awoodiisa ciyaareed iyo xirfadiisa sare, wuxuuna wali doonayaa inuu kusii sameeyo horumar balaadhan”.
Markii uu Neymar Jr booqday ciyaartoyda kooxdiisii hore ee Barcelona ayay warbaahinta Catalonia baahiyeen in Neymar uu asxaabtiisa dhaw u sheegay in uu qalad ku lahaa markii uu ka baxay Barcelona isaga oo muddo kooban oo uu Barcelona ka maqnaa markii labaad booqasho ugu tagay saaxiibadisiii hore ee Camp Nou waqtiga fiican ku soo wada qaateen.